Waa kuma Wasiirka Cusub ee Dalxiiska Iiraan Mudane. Seyed Ezatullah Zarghami
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Iiraan » Waa kuma Wasiirka Cusub ee Dalxiiska Iiraan Mudane. Seyed Ezatullah Zarghami
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Iiraan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ezzatollah Zarghami, Wasiirka Dalxiiska Iran Xushmad: Khamenei.ir -
Madaxweynaha cusub ee Iiraan ayaa u magacaabay Hon. Seyed Ezatullah Zarghami oo loo magacaabay Wasiirka Cusub ee Dhaqanka iyo Dalxiiska. Wuxuu ahaa Wasiir ku -xigeenka Wasaaradda Dhaqanka iyo Wasaaradda Islaamka iyo sidoo kale Wasaaradda Difaaca ka hor intii uusan qaban xilka madaxa Idaacadda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran laga soo bilaabo 2004 ilaa 2014.
Ebrahim Raisi, madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, ayaa golihiisa wasiirrada magacaabay 8 -dii Ogosto.
Wasaaradda Hidaha iyo Dalxiiska ee Iiraan waxay yeelan doontaa Mudane. Seyed Ezatullah Zarghami oo loo magacaabay Wasiirka cusub.
Sannadkii 2018 Iiraan waxay lahayd ku dhawaad ​​8 milyan oo booqdeyaal ajnabi ah.
Iiraan waa mid ka mid ah xadaaradaha ugu qadiimsan dunida waxayna tan iyo bilowgiiba ka mid ahayd ilbaxnimooyinka adduunka ugu fekerka iyo murugsan. Waxaa jira dhinacyo ka mid ah ilbaxnimada Iiraan oo, si uun ama si kale, u taabatay ku dhawaad ​​qof kasta oo bini aadamka ah. Laakiin sheekada sida taasi u dhacday, iyo ahmiyadda buuxda ee saamayntaas, badiyaa lama yaqaan oo waa la illaawaa.
Ururka Dalxiiska iyo Dalxiiska Iiraan wuxuu qeexayaa dalxiiska Iiraan isagoo leh U socdaal IRAN. Faaris, Dhulka afarta xilli leh taariikhdiisa hodanka ah iyo midabka leh, taallooyin aan tiro lahayn, soo dhoweynta Iiraan iyo cunno macaan.
Txagjirnimada in Iiraan waa kala duwan yahay, oo bixisa hawlo kala duwan oo ka bilaabma socodka iyo barafka buuraha Alborz iyo Zagros, ilaa fasaxyada xeebta ee Gacanka Faaris.
Iiraan waxaa si xun ugu dhacay COVID-19 sidoo kale waxay ku dhacday safarkeeda iyo warshadaha dalxiiska.
Warshadaha dalxiiska ee Iiraan waxaa soo gaadhay ilaa 320 tirilyan riyaal ($ 7.6 bilyan oo ah sarrifka rasmiga ah ee 42,000 riyaal halkii doolar) tan iyo markii uu dillaacay cudurka faafa ee coronavirus, ISNA ayaa werisay Talaadadii.
Faafida ayaa sidoo kale burburisay in ka badan 44,000 oo shaqooyin ah waaxda socdaalka ee marba marka ka dambaysa ee dalka, warbixinta ayaa intaas ku dartay.
Sababtoo ah dillaaca coronavirus ee Iran iyo shaqo la’aanta dambe iyo khasaaraha maaliyadeed, xarumaha hoyga ayaa ugu daran. Tirakoobyadan ayaa daboolaya muddada u dhaxaysa Febraayo 2020 iyo guga 2021.
Xarumaha hoyga ayaa qaatay 280 tirilyan riyaal ($ 6.6 bilyan) oo uu ku dhacay fayraska, halka in ka badan 21,000 oo ka shaqeeya xarumahaas ay shaqooyinkoodii waayeen muddadii la sheegay.
Wakaaladaha dalxiiska ayaa ahaa kooxda labaad ee ay sida weyn u saameysay warshadaha dalxiiska, iyada oo in ka badan 10 tiriliyan riyaal ($ 238 milyan) ay waxyeello soo gaartay iyo in ka badan 6,000 oo shaqo la’aan ah tan iyo markii uu dillaacay.
Dhanka shaqada iyo khasaaraha maaliyadeed, dhismayaasha dalxiiska, hoyga deegaanka, iyo hagayaasha dalxiiska ayaa sidoo kale ka mid ah kooxaha sida weyn u saameeyay warshadaha dalxiiska.
Yaa ah waa mudane. Sayid Ezzatollah Zargham, wasiirka cusub ee dalxiiska Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran?